Xaafadda Daarusalaam waxaad ka heli kartaa dabaqyo kala duwan . dabaqan wuxuu ka koobanyahay 2 biyaano. Biyaanada hoose wuxuu leeyahay 2 qol jiif, fadhi, qado, jiko, 2 musqulood, barando, garaash gali 2 gaari iyo jardiin.
Waxaa dheeraad ah 2 qol iyo masqul (service)-ka ah oo loogu talagalay shaqaalaha guriga ka adeegaya.
Biyaanada kore wuxuu leeyahay 3 qol jiif oo mid ka mid leeyahay musqul. Wuxuu sidoo kale leeyahay 2 musqulood hall iyo balkoon. Guud ahaa dabaqa cabirkiisu biyaanada kore iyo midda hoose waa (30*20) oo u dhigantan 600 mitir isku wareeg.
waxey ka kooban tahay 4 qol oo jiif ah oo mid ka…
Villadda waxey ka kooban tahay 4 qol oo jiif ah oo mid…
Type Property Type VILLA 3 ROOM DARBI SAAR VILLA 4 ROOM DHEXDHIS Villa Type D - 6 Room Villa unit F.F.ROOF VILLA UNIT SHUB
Town Town Darusalaam City Mogadishu
Baths Baths 3 5 6
Addtional Features Additional Features 2 Jardiin 6X5 2 qol Service 4X2.5 Balcony Barando 10X2.5 Barando 3.5X2.5 Barando 3X2 Famili hall 4X4 Garaash 2 gaari Garaash Gaari Jardiin 4.5X3.5 Jardiin 4.5X8.5 Jardiin Cagaaran Kushiin 3.5X3.3 Kushiin 4X3.5 Kushiin 4X4 Qol Fadhi 4X5 Qol Fadhi 6X4 Qol Fadhi 7X6 Qol Suuli leh 4X5 Qol Suuli leh 5.5X4 Qol suuli leh 5X5 Qolka Cuntada 3X4 Qolka Cuntada 4.3X3.5
waxey ka kooban tahay 4 qol oo jiif ah oo mid ka mid ah leeyahay musqul, waxey sidoo kale leedahay fadhi iyo qado, 2 musqulood,…